देउवाले राष्ट्रपतिलाई 'तपाई' नभनेपछि ओली आक्रोशित ! - Kantipath.com
देउवाले राष्ट्रपतिलाई ‘तपाई’ नभनेपछि ओली आक्रोशित !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रयोग गरेको भाषाप्रति आप्पत्ति जनाएका छन् । शनिबार एक पुस्तक बिमोचनमा ओलीले जसले लोकतन्त्र मान्दैन, उनीहरु लोकतन्त्रको हिमायती बनेको बताए ।
Previous Previous post: प्रधानमन्त्रीद्वारा आयोगलाई निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन
Next Next post: पत्रकारलाई निःशुल्क परामर्श दिइने
पुरुषको पेटमा बच्चा भेटिएपछी …
विश्वकै महंगो गुलाबी रंगको हीरा १ करोड अमेरिकी डलरमा बिक्री
जन्मने बित्तिकै बच्चा हिडेपछी … (भिडियो भाइरल)
अचार स्वादको कण्डम बजारमा !
गर्भवती भए-नभएको पत्ता लगाउन सक्ने भ्यागुतो !